Gresy: fanoherana ny fitondrana fitaovam-piadiana ho an’Isiraely · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 19 Janoary 2009 19:52 GMT
Vakio amin'ny teny Français, 繁體中文, 简体中文, македонски, বাংলা, Swahili, Shqip, Español, Italiano, Nederlands, русский, srpski, Português, عربي, polski, 日本語, فارسی, bahasa Indonesia, English
@izao ady misy any Gaza izao dia nitroatra ny mitoraka blaogy grika noho ny vaovao nivoaka t@ ity volana ity nilaza fa nisy fitondrana fitaovam-piadiana maro dia maro avy any etazonia ho any isiraely nandalo tao @ seranan-tsambo tanan'olon-tsotra grika ao Astakos. Nampiasa twitter ry zareo hanaovany famotorana sy hanerena ny governemanta grika hanakatso ny famatsiana ny fitaovam-piadiana.
Naato ny fampitana ireo fitaovam-piadiana noho ny tifitifitra nataon'ny antoko mpanohitra ny fitondrana grika sy ny antson'ny Amnesty International handrara ny fanondranana ireo fitaovam-piadiana.
T@ voalohany, nanda ny vaovao notaterin'ny agence Reuters t@ 9 janoary ny loharanom-baovaon'ny fanjakana. Saingy efa azon'ny mampiasa twitter ny vaovao ary efa nanadihady, naka lahatsoratra nadika avy @ teny grika tao @ Indy.gr sampan'ny vondrom-baovao iray tsy miankina Indymedia Athens ry zareo.
Efa novolavolaina t@ alalan'ny twitter ny hevitra anaovana barazy eny @ seranan-tsambo:
itsomp: http://is.gd/f8Wa Afaka manao barazy ny seranan-tsambon'ny Astakos ve isika? ny sambo amerikanina sy israelianina ihany no sakanana
nandefa hafatra tany @ ministeran'ny raharaham-bahiny t@ alalan'ny twitter ny mpitoraka blaogy sasany satria misoratra anarana ao @ twitter ny ekipa misahana ny serasera ao @ ity minisitera ity:
Ho an'i Dora Bakoyannis, fa inona marina no misy ao @ity seran-tsambo ao Astaskos ity e? tsy te-ho voarohirohy @ ity fandripahana misy any Gaza ity izahay grika
Sambany ny mpiasan'ny minisitera no nandika ny fitsipika tsy hiresaka mivantana @ vahoaka grika @ alalan'ny twitter:
… valiny momba ny Astakos, http://tinyurl.com/9ts6xw
Mitondra mankany @ filazana ofisialin'ny minisitera milaza fa “tsy mitombina” ny vaovao milaza ny fisian'ny sambo mitatitra fitaovam-piadiana mandalo ao @ seranan-tsambon'i Astakos na seranana hafa ny rohy.
Nefa nisy tolotra tany @ tranonkalan'ny fitondrana amerikanina mitady sambo hitondra ny entana hitan'i Odysseas:
ao @ity rohy ity no ahitanao ny fitadiavan'ny tafika amerikanina sambo hitondra bala avy ao @seranan-tsambon'i Astakos ho any Ashdod,isiraely.misy io sambo io ary miandry ilay mpitatitra nifanaraka taminy.
Notohizan'ny mpampiasa Twitter ny fanetsiketsehana na dia teo aza ny fandavan'ny fanjakana:
Dora Bakoyannis, Dia ahoana izany ny amin'ity takelaka [misy fitadiavana mpitatitra] ity?
Ny andro manaraka dia nitatitra ny mpampita vaovao fa nofoanana ny famindrana entana handeha amina sambo hafa. Tonga dia nisy ni-tweet (nisioka am-bolongana) avy hatrany izany:
Nantsahatra ny fitondrana ny bala mandalo eto Astakos noho ny ady any Gaza!
Namintimpintina ny vaovao niely ny mpamaham-bolongana magicasland.com :
Nanamarika ny APE [famoaham-baovao Grika] fa nofoanana ny fampidirana an-tsambo ny kaontenera 325 miaty bala miainga avy ao Astakos ka hizotra ho any Ashdod. [..] Mazava loatra fa hisy ny famindrana entana any amin'ny toerana sasany; fa izany hoe tsy anio na avy eto.
Mbola nanadihady lalina kokoa i coolplatanos , ary dia nahatsikaritra fitadiavam-piaraha-miasa hafa, ary nanamarina fa nofoanana ny fitadiavam-piaraha-miasa teo aloha:
… Efa nisy ihany koa ny antso misy fifanarahana tamin'ny 6 Desambra 2008 (nivoaka voalohany tamin'ny 4 Desambra), navoakan'ny tafika an-dranomasina Amerikana. Fifanarahana hitondra fitaovam-piadiana hafa, izay mbola mavesabesatra kokoa satria sambo mahazaka 989 TEU raha kely indrindra no ilaina.Na izany aza aloha ilay fitadiavana mpitatitra hitondra 325 TEU dia efa nametrahana hafatra farany androany 13 Janoary [09:00 EST], manao hoe “nofoanana amin'izao fotoana izao”.
Nahita kisendrasendra ireo fitadiavana mpitatitra ireo aho tamin'ny fampiasana ny mili-pikarohana Google